Wararka - Dalabka dalabka mar labaad
Adeegga Keenista Birta
Sariirtaha caaryada ee tuubooyinka la taaban karo ee la xoojiyay
Tuur Sariirta Dhuxusha Wadajir biibiile caaryada
Tuur Steel Rubber Ring Wadajir biibiile caaryada caaryada
Adeegga Badeecada Birta Giraanta
Tuubada Birta Kabka
Ductile Cast Iron Products Services
Aliminum Service Casting
Qalabka kale ee Aluminium
Dalabka mar labaad
Maalin maalmaha ka mid ah qeybtii hore ee 2020, waxaan si lama filaan ah iimayl uga soo qaadnay macmiil na weydiisanaya inaan mar kale soo xiganno sariirta hoose oo aan u sheegno macaamilka inta sariirta lagu ridi karo weel 20-ft ah. Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimadeenii hore, waxaan si dhakhso ah u xisaabinnay oraahyadii ugu dambeeyay waxaanan ku wargelinnay macaamilka awoodda weel 20-fuudh ah. Intaa ka dib, waxaan sugaynay waqti dheer.
Qiyaastii 2 bilood kadib, macmiilkii ayaa ugu dambayntii soo diray email. Emailka waxaa ku jiray 4 amar, amar kastana wuxuu leeyahay shay faahfaahsan, qeexitaanno, tiro, iyo warshado loo socdo. Waxaa soo baxday in macaamilku uu u kala qaybiyo amarka hadba baahida warshadahooda kala duwan. Waa maxay macmiil taxaddar leh! Iyada oo ku saleysan tan, waxaan soo saarnay 4 qaansheegta proforma waxaanan u dirnay macaamilka PI.
Intaa ka dib, waxaa mar kale la sugay muddo dheer. In kasta oo aan u wada malaynay in amarradan ay ahaayeen kuwo aan rajo lahayn, ayaa maalin maalmaha ka mid ah bangigeennu na soo wacay oo noo sheegay in xawaaladu dibadda ka timid oo noo sheegtay qaddarka. Ka dib markaan hubinay, waxaan ogaanay inay tahay lacag -bixintii hore ee macmiilku soo diray. Waxaan emayl kale u dirnay macaamilka si loo xaqiijiyo, macmiilkuna wuxuu sheegay inay hubaan inay bixin doonaan lacag -bixinta hore. Taasi waa farxad samada ka timid, aad baad ugu mahadsan tahay taageeradaada mar kale!
Sababtoo ah waxaan ilaalinaynay caaryayaashii hore, iyo khibraddii hore ee s, waxaan si dhaqso leh u diyaarinnay wax soo saar. Amarkaan, ma jiraan wax caaryaal ah 3 shay. Sababtoo ah 3 -daan shey laguma iibsan amarkii hore, sidaa darteed waxaan ku furnay caarrooyinkii waqti waxaana ku ridnay qorshaha wax soo saarka waqtigii loogu talagalay.
Sababtoo ah xaaladda faafa ee COVID2019 ee adduunka, macaamilku uma imaan karin Shiinaha kormeer. Sidaa darteed, ka dib markii la soo saaray dufcaddii ugu horraysay ee sariirta hoose, waxaan samaynay kormeer aad u daran. Badeecadaha la soo saaray waqtigan, ha ahaato habka kabka ama habka alxanka, aad bay uga fiican tahay badeecadii hore, gaar ahaan xajmiga dusha sare ee shaqada ayaa aad uga fiican badeecadihii hore, qallafsanaanta sariirtaha qaarkood waxay gaadhay Ra1.6 ama xataa ka sii fiican, oo dhalaalaya sida muraayadda oo kale. Sababtoo ah waqtigan, waxaan u adeegsanay saxan sare CNC lathe si aan u socodsiino sariirtahan hoose, shaqaaluhuna sidoo kale waa farsamayaqaanno sare oo leh waayo -aragnimo hodan ah.
Waxaan kaloo hagaajin ku samaynay baakadaha si baakaduhu u xoog badan yihiin oo ay u hubiso badbaadada saxarka hoose inta lagu jiro gaadiidka.
Tirada guud ee amarradani waa gebi ahaanba 2940 gogo ', oo miisaankeedu yahay ilaa 260 tan. Illaa iyo hadda, waxaan dhammeystirnay in ka badan kala bar amarada. Waxaan aaminsanahay inaan dhowaan dhammaystiri doonno dhammaan amarrada oo aan u gudbin doonno dhammaan badeecadaha macaamiisha.
Mar labaad waxaan u mahadcelineynaa macaamiisheenna kalsoonidooda iyo taageeradooda, waxaan sii wadi doonnaa hal-abuurnimada teknolojiyadeena wax-soo-saarka, sii wanaajinnaa tayada alaabtayada, oo si hufan u soo saarno una gaarsiinnaa mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna jira iyo kuwa mustaqbalkaba.
Waxaan halkaan u joognay inaan sugno inaan idinka kaashanno xaalad guul wada leh!
Waqtiga dhejinta: Jul-19-2021